Rugby : hidona amin’i La Réunion U24 ny Makis U23 | NewsMada
Rugby : hidona amin’i La Réunion U24 ny Makis U23
Efa manomana izay ho mpilalao handrafitra ny Makis “sénior” ny federasiona malagasin’ny rugby (FMR) ankehitriny. Araka izany, hisy lalao hitsapana ireo Makis U23, ny volana marsa ho avy izao.
Hiatrika lalao sedra ireo mpilalao ao anatin’ny Makis sokajy U23, ny 12 marsa ho avy izao. Araka ny fantatra, ny ekipam-pirenen’i La Réunion, U24 no hifandona amin’izy ireo. Ho fitsapana ireo zandrikely, handrafitra ny Makis zokiny atsy ho atsy, ny tena tanjona amin’izany. Efa mila mpandimby tokoa ireo mpilalao ao anatin’ny Makis ankehitriny. Tsy vao izao akory ny nitsongana sy nanomanana ireo mpilalao U23 ireo fa efa tao anatin’ny roa taona izay, nandritra ny fifaninanana “Inter – arrondissement”. Hanomboka ny alatsinainy 8 febroary ho avy izao ny fampivondronana ireo mpilalao ao anatin’ny Makis U23 ireo.
Ny Makis de Madagascar, izay hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 1B), ny 12 ka hatramin’ny 19 jona izao. Raha tsiahivina, eto Madagasikara ny hanaovana azy io ho an’ny sokajy “B”, izay iarahan’ny Makis sy Sénégal ary Zambia. Any Tonizia kosa ny vondrona “A”, misy an’i Tonizia sy Côte d’Ivoire ary Botsoana. Hiatrika ny famaranana ireo ekipa roa voalohany isam-bondrona. Fihaonanah atao ny 16 jolay. Tsy mbola fantatra kosa ny firenena hanatanterahana, izany lalao izany.
Manomana ny “Aroi”
Ankoatra izay, handray ny “Lalaon’ny Aroi”, U16 sy U18, ho an’ny rugby lalaovin’olona fito, isika eto Madagasikara ny 10 ka hatramin’ny 12 marsa ho avy izao. Efa ao anatin’ny fanomanana izany ny federasiona malagasy. Nisy, araka izany, ny lalao fifantenana ireo handrafitra ny Makis, omaly, teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka. Nahatratra 180 ireo mpilalao tonga teny an-toerana. Ny haben’ny vatana, ny fahaizam-baolina sy ny taona, no mason-tsivana ho an’ireo mpifaninana. Misy efa mpilalao ao anatin’ny klioba ny sasany amin’izy ireo fa ny ankamaroany kosa mpankafy fotsiny.
Manana ekipa 3 i Madagasikara eo amin’ny U18, ary 5 kosa ny eo amin’ny U16, amin’io “Lalaon’ny Aroi”, io. Raha tsiahivina, tompondaka ny Makis, teo amin’ny U18, ary lasan’i La Réunion kosa ny U16, tamin’ny taon-dasa.